2 KỌRINT 5 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (2KỌR 5)
2 KỌRINT 5
Anyị adịghị agbalị ịgwa unu na anyị dị mma, kama anyị chọrọ inye unu ihe unu ga-eji nyaa isi mgbe unu na-ekwu ihe banyere anyị, ka unu nwee ike ịmata ihe unu ga-azaghachi ndị ahụ na-anya isi banyere ihe ha ji anya ha hụ, kama ụdị ezi agwa ha nwere.
Ara ọ̀ dị anyị ikwu ihe dị otu a banyere onwe anyị? Ọ bụrụ na anyị dị ka ndị akọnuche ha na-ezughị oke, ọ bụ nꞌihi na anyị chọrọ iwetara Chineke otuto. Ọ bụrụkwa na ihe anyị na-ekwu na-egosi na anyị bụ ndị isi zuru oke, ọ bụkwa nꞌihi ọdịmma unu.
Anyị onwe anyị adịghị elekwa onye ọ bụla anya site nꞌihe ndị mmadụ na-eche banyere ha. Nꞌihi na anyị sitere nꞌụzọ dị otu a lee Kraịst anya, chee na ọ bụ mmadụ efu. Ma ugbu a anyị amakwaghị ya nꞌụzọ dị otu a.
Ya mere, anyị bụ ndị na-anọchi anya Kraịst ijere ya ozi nꞌụwa. Chineke ji anyị naagwa unu okwu. Anyị na-arịọ unu dị ka ọ bụ Kraịst nꞌonwe ya na-arịọ unu. Biko, bịanụ ka unu na Chineke bụrụ enyi.
2 KỌRINT 5:13
2 KỌRINT 5:16
2 KỌRINT 5:20